Thugs Of Hindostan oo noqday filimka 9-aad Aamir Khan hogaamiye ka yahay kaasi oo nidaamka waalida ah (bumper opening) ku furmo – Filimside.net
Thugs Of Hindostan oo noqday filimka 9-aad Aamir Khan hogaamiye ka yahay kaasi oo nidaamka waalida ah (bumper opening) ku furmo
Shabakada Boxoffice India (BOI) ayaa cadeesay in Thugs Of Hindostan uu noqday filimka 9-aad Aamir Khan hogaamiye ka yahay kaasi oo nidaamka waalida ah (bumper opening) ku furmo madaama maanta subaxdii hore filimkan si waali ah gudaha Hindiya kaga furmay.
Waxaa jiro farqi u dhaxeeyo nidaamka waalida ah (bumper opening) sida uu ahaan jiray 90-maadkii oo ku xeen daabnaa 90% ilaa 100% madaama tiyaatarada xiligaas baaxad ahaan yaraayeen balse haatan nidaamka (bumper opening) waxaa loo qataa filimka inuu ku furmo 65% ilaa 85% weyba adag tahay in filim xitaa 80% xiligaan ku furmo madaama tiyaatarada aad u badan yihiin baaxadoodana siweyn loo balaariyay.
Waxaa xusid mudan Aamir Khan filimkiisii Dil sanadii 1990 uu ku furmay (bumper opening) oo weliba ah 95% ilaa 100% maanta lagama yaabo inay midaas dhacdo!
Thugs Of Hindostan waa filimka 45-aad ee Aamir Khan hogaamiye ka yahay waxaana xusid mudan in 9-ka mid ah nidaamka waalida ah ku furmeen.
Amitabh Bachchan oo isagana filimka Thugs Of Hindostan wax ka hogaaminaayo waxaa ugu dambeesay filimkiisa oo si waali ah ku furmo 17-sano ka hor waana markii la daawaday Kabhi Khushi Kabhie Gham.
Laakiin sida guud Big Bachchan wuxuu heestaa 30-filim oo nidaamka waalida ah ku furmeen waayo 80-maadkii iyo bilawgii 90-maadkii filim walbo oo uu sameeyo si waali ah ayuu ku furmi jiray fagta hore ama HIT ha noqdo ama FLOP ha noqdo.
Fadlan hoos kaga bogo 9-ka filim ee Aamir Khan sameeyay kuwaas oo nidaamka waalida ah (bumper opening) ku furmeen:
6. Ghajini (2008) – Maalin Fasax Qaran Jiro
7. 3 idiots (2009) – Maalin Fasax Qaran Jiro
9. Thugs Of Hindustan (2018) – Maalin Fasax Qaran Jiro
Waxaa Aqrisay 709